लागू होला त बक्स अफिस ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
लागू होला त बक्स अफिस ?
केही स्वदेशी फिल्मले हदैसम्मको व्यापार गर्दै नयाँ इतिहास कायम गरेका छन्। नेपालजस्तो सानो मुुलुुकमा १६÷१७ करोड रुपैयाँको व्यापार चानचुुने होइन। तर पनि निर्माता खुुसी छैनन्। निर्माताले भनेका छन्, सिनेमाघरहरूले निर्माताको पैसामा रजाइँ गरेका छन्, बक्स अफिस लागू हुुनुुप¥यो। बक्स अफिस मात्र होइन, निर्माताले समग्र व्यापारको आफूले पाउँदै आएको हिस्सामा पनि वृद्धि गर्नुुपर्ने माग राखिरहेका छन्।
लेख श्रोत: http://annapurnapost.com/news/97782
(२९ बैशाख २०७५ मा अन्नपुर्ण पोष्टको बिशेषांक ‘फूर्सद’मा प्रकाशित लेख)